खबर – Page2– Tharu Community
गोरुको थलोमा यसरी बाँधिए ७० वर्षे हजुरबा !
२७ असोज, जनकपुर । तस्वीरमा एकजना हजुरबालाई गोरु बाँध्ने किलोमा मोटो डोरीले टनटनी बाँधिएको छ । गम्छा बेरेको एक व्यक्तिले … More गोरुको थलोमा यसरी बाँधिए ७० वर्षे हजुरबा ! →
गोरुको थलोमा यसरी बाँधिए ७० वर्षे हजुरबा ! August 16, 2020 grandfather, janakpur, molested	0No comments on गोरुको थलोमा यसरी बाँधिए ७० वर्षे हजुरबा !